देउवा सरकारका अबसर र चुनौति « Harekpal
-बेनीबहादुर कार्की- August 11, 2021
पाँचबर्षकालागि बहुमत पाएको ओली सरकारले प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै अहम्का कारण बहुमत गुमाएर २ पटक सार्मभौम संसदलाईनै बिघटन गरेकाले १४९ जना सांसदहरुले राष्ट्रपति समक्ष निबेदन दिएकोमा राष्ट्रपतिलेपनि गलत निर्णय गरेकाले १४६ जना सांसदहरु सशरिर अदालतमा उपस्थित भएर सर्बोच्च अदालतमा रिट निबेदन दिएको आधारमा अहिलेको शेरबहादुर देउवा सरकारले सरकार संचालन गर्ने अबसर पाएको हो ।
अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएको भन्ने भनाइ सरासर गलत हो । बर्तमान सरकार बहुमत सांसदहरुलेनै बनाएको हो । अदालतले त नेपालको संबिधान २०७२ को धारा ७६ ( ५ ) को ब्याख्यामात्र गरेको हो । नयाँ अभ्यास भएकाले संबिधानको बारेमा राम्ररी जानकारी नभएकाहरुलाई भ्रममात्र परेको हो । अहिलेको ब्याख्याले भबिश्यमा यसबारे प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसमेतलाई अहिले गरेको गल्ती दोहोराउन नहुने भनेर राम्ररी जानकारी गराएको छ ।
परिस्थीतिबस अहिले देउवाले प्रधानमन्त्री भएर सरकार संचालन गर्ने अबसर पाउनु भएको छ । यो राम्रो अबसर हो । यो अबसरलाई सही सदुपयोगगर्न सक्नुनै बुद्दीमानी हुनेछ । पाँचदलको गठबन्दन्को सहयोगले यो सरकारको निर्माण भएको सर्बबिधीतै छ । हरेक ब्यतिm र समुहको आफ्नै स्वार्थ हुनेमा दुइमत छैन । यसो हुने भएपनि अहिले सरकार गठन गरेका सबै नेताहरुले हन्डर ठक्कर खाएर खारिएकाले आफ्नो स्वार्थलाई न्युनीकरण गरेर अहिले सरकार गठन गरेको मिशन सफल गर्नुहुने बिश्वास नेपाली जनताले लिएका छन् ,, नेपाली नागरिकको यो बिश्वासलाई कतै डग्न नदिइ सरकार संचालनगर्न सक्नुपर्छ । तबमात्र यावत चुनौति स्वीकारेर गठन गरेको यो सरकारको लक्ष र उदेश्य पुरा हुने छ ।
यसोगर्न सकेमात्र बिगतमा ओली सरकारले गरेका गलतकाम सच्याएर नेपाल र नेपालीको भलोगर्ने काम गर्न संभव हुनेछ । बर्तमान सरकारको सुनौलो अबसर भनेकै बिगतमा ओली सरकारले संबिधान र ऐन नियम कुल्चेर अधिनायकबादी शैलीमा गरेका कामहरुलाई सच्याएर नेपालको संबिधान २०७२ लाई संरक्षण गर्नुनै मुलकाम हो । त्यतीबेला नेपालीको चिन्तानै यही थियो । अहिलेको कोरोना कहरबाट नेपालीलाई बचाउन समयमै सबै उमेरका नेपालीलाई खोपदिएर बर्तमान संबिधानको बाटोबाट नेपाल र नेपालीको हितहुने कामगर्न पाउनु यो सरकारकालागि ठुलो अबसर हो ।
अहिलेसम्म खोपदिने तत्परता बालबालिकालाई अध्ययनभत्ता, बिदेशबाट घर फर्केकालाई सरकारलेनै क्वारेन्टाइन् खर्च दिने र ओली सरकारले गरेका गलत काम बदर गरेर प्रशंसा पाएको बर्तमान सरकारले अब ६० बर्षमाथिका जेष्ठ नागकिलाई भत्ता र कर्मचारीहरुलाई तलबबृद्दिको निर्णयसमेतका राम्राकामगरेर यो अबसरलाई हरहालतमा क्यास गरेर नेमालीको मन जित्न जरुरी छ । यसोगर्न सकेमा बिगतमा प्र.मं. देउवाको खस्केको साखबाट माथि उठेर लोकप्रियताको शिखरमा पुग्न बेरलाग्ने छैन । बिगतमा प्रतिगमनको आन्दोलनभन्दा पहिले गिरिजा बाबुकोपनि धेरै बिरोध थियो । त्यो आन्दोलनमा माओबादीसमेत सबैलाई मिलाएर सफल नेतृत्व गरेकाले अहिलेपनि प्रचन्ड मुतmकन्ठले प्रशंसा गरिरहनु भएको छ , । त्यपछि गिरिजाबाबुको ब्यतिmत्वको उचाइ यसरी बढोकि सबैलेउहाँको नेतृत्व स्वीकारे । यसरी प्रतिगमनको आन्दोलनको सफल नेतृत्व गरेर गिरिजाबाबु जनआन्दोलनको कमान्डर कहलाउनु भयो । यसरीनै अहिले प्र. मं. देउवालाई यो बिशेष अबसर मिलेको छ । यो अबसरमा उहाँलाई तरबारमा दुबैतिर धार भएसरह भएको छ । सफल हुनसके सबैभन्दा माथि जानसक्ने संभाबनालाई नर्कान मिल्दैन । होइनभने हिजोकोभन्दापनि धेरै बदनामी हुनेछ ।
यो सरकारलाई सुनौला अबसरकोसाथै चुनौतिका चांगपनि रहेका छन् । पहिलो चुनौति भनेको सरकार गठन भएको ३ हप्ताभन्दा धेरै भइसकेको छ । अहिलेसम्म सरकारले पुर्णता पाएको छैन । यसैलाई बिपक्षीहरुले इसु बनाएका छन् । त्यसैले अब दिन गनेर होइन घन्टा गनेर सरकारलाई पुर्णता दिन जरुरी भइसकेको छ । दोश्रो चुनौति भनेको अहिलेको गठबन्दनलाई मिलाएर लान सक्नु पर्छ । यस्मा प्र.मं.को अहंभुमिका हुने भएकाले आफुले त्याग गरेर भएपनि गठबन्धन्का सबैलाई मिलाएर सरकारलाई सफल बनाउन सक्नुपर्छ ,। योनै सफलताको सुत्र हुनेछ । तेश्रो र अहंकाम भनेको सबैउमेरका नेपालीलाई समयमै खोप दिनु हो । यस्को प्रतिबद्दता शुरुमै सरकारले गरिसकेको छ । यो कामलाई सहजता दिने काम बीचैमा प्र.मं.ले नियुतm गरेका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले गरिरहनु भएको छ ।
छोटै समयमा आबश्यकपर्ने खोपको प्रबन्ध गरेकाले यो सकारात्मक काम भएको छ । यो काम समयमै गर्न सकेमा नागरिकको ज्यान सुरक्षीत हुनेर नेपालीको मन जितिने छ । चौथो र अहिलेसम्म नियंत्रणको साटो दिनानुदिन नेपालमा बढेको भनेको भ्रष्टाचारनै हो । यस्बाट नेपाली जनता आजित भएका छन् । यसलाई नियंत्रणगर्न मन्त्री परिषदका सबैले आमा कसम् खाएर घुस् खान र आफुभन्दा तलका सबैलाई भ्रष्टाचार गर्नदिनु हुँदैन । यही एउटा भ्रष्टाचारमात्र नियन्त्रण गर्नसके यो सरकारको ऐतिहासिक काम हुनेछ र यही कामले यो सरकारलाई बैतरणी पार लगाउने छ । पाँचौं र सबैभन्दा महत्वपुर्ण काम भनेको निष्पक्षता र इमान्दारहरुलाई उपयुतm स्थानमा अबसर दिनु हो । कुलमान्लाई बिद्युतको पुनः जिम्मेवारी दिने चर्चाले यो सरकारलाई माथि उठाएको छ । यसरीनै योग्य र इमान्दारलाई राष्ट्रको आबश्यकता अनुसार खोजी खोजी अबसर दिएमा यो सरकारको ऐतिहासिक काम हुनेछ । यसैले सरकारलाई अगाडिको सबै चुनौतिमा सफलताको अबसर दिने छ ।
देउवा सरकारका साढे दुई महिना, जनआकाङ्क्षा बढी सुस्त..